Ezigbo nwamba m na ụwa anwansi ya na nwamba ndị nwere nrọ | Gam akporosis
Ezigbo My Cat bụ egwuregwu ọhụrụ na-anara otuto site n'aka ọtụtụ maka ike zuru ike ma banye n'ụwa ebe nwamba nwere ike nrọ na ịnụ ụtọ oge placid.
Ọ bụ ya mere ya pastel agba palette na na flat flat visual style with her gradients, na-etinye oge ụfọdụ na-eme ka ụwa nwee ihe dị iche iche eji achọ mma na ịnweta ndị enyi cat, na-eduga anyị na ahụmịhe pụrụ iche pụrụ iche maka egwuregwu na ekwentị mkpanaaka anyị, ka anyị rute ya!
1 Ebe a n'efu
2 Mee ulo anwansi ma kpoo obi enyi n'ime Ezigbo My Cat
3 Ọ bụrụ na m nwere ọtụtụ egwuregwu ...
Ebe a n'efu
Ezigbo My Cat nwere ike anyị cheta Penguin Isle en ya rụpụta na na oké nkà direction na visual. Ọ bụ ezie na anyị nọrọ n'ihi otu egwuregwu egwuregwu simulaị nke nwamba siri nwee ike ịbụ abụ kacha mma ebe misimisi bụ ndị protagonists; n'ezie Flore Games, na mmepe, ugbua ha wetara anyị Tap Tap Fish na mmalite nke afọ.
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịga imeziwanye akụrụngwa nke ndị enyi cat na ha na-ezute ndị enyi ọhụrụ site na ụgbọ oloko nke na-eweta ha site na ụwa ọzọ. Ihe niile nwere ụda pastel ya na ụdị ọhụụ ya, anyị bụ ndị na-ekpebi mgbe anyị ga-eweta nwamba ọzọ, otu esi emeziwanye ụlọ ọrụ na ihe ọ bụ iji chọpụta ihe nzuzo niile ahụ na-echere anyị.
N'ihi na Ezigbo My Cat bụ egwuregwu gam akporo ebe ị fọrọ nke nta Anyị nwere ike ihu akụkọ Alice na Wonderland ebe anyi na amaghi ihe nchoputa obula anyi na emeputa ga ewetara anyi.
Mee ulo anwansi ma kpoo obi enyi n'ime Ezigbo My Cat
Ezigbo My Cat na-egwuri egwu dị ka ya Eluigwe: ofmụ nke Ìhè online ọtụtụ ka e kpalie site n'ụkpụrụ nke ọbụbụenyi na ịdị ọcha n’etiti ndị dị ndụ. N'ezie, ọ na-agba ya ume na obi ndị ahụ sitere na mkparịta ụka dị n'etiti nwamba dị iche iche na-achọ ụlọ ọrụ iji nagide oge ụtọ ụwa ahụ anyị na-ewuru ha.
Anyị objetive ọ ga - enweta ego na ndozi niile anyị na - eme na oge dị iche iche anyị na-ewu maka nwamba anyị hụrụ n'anya. Ma ọ bụrụ na anyị agwalarị na ọ dị n'asụsụ Spanish ma na anyị nwere ọtụtụ ihe anyị rụzuru ka anyị wee ghara ịla n'iyi na-ekiri otú nwamba ahụ si na-agbakọ ma ọ bụ na-agagharị n'ogige anwansi ndị ahụ.
Na ụdị ejiji nwekwara ọtụtụ Mmetụta Genshin, Nnukwu nkwado a na-eweta ntanetị nke na-eme ka ume nke anụ ọhịa ahụ dị na ekwentị anyị. Yabụ n'ozuzu ya, egwuregwu na-adọrọ adọrọ nke nwere ekweisi dị mma anyị nwere ike ịwakpo site na ezigbo mmetụta dị mma. Ọ bụ ihe na-enye ohere ka egwuregwu ndị a taa na ndị anyị na-anabata, mgbe ụfọdụ, na-ezuju ọtụtụ mpụ, igbu ọchụ na mgbuchapụ dị iche iche na agha royale (nke na-amasị anyị, eh).
Ọ bụrụ na m nwere ọtụtụ egwuregwu ...
Ugbu a, anyị nwere ike na-atụ anya na Ezigbo My Cat ga-enwe oge ụfọdụ, ikekwe na akụkụ nke abụọ, onye na-egwu egwu n'ịntanetị nke anyị nwere ike ịbanye n'ime ụwa ahụ dị oke anwansi na nke ọma n'echiche. O nwere oge na-akpali akpali dị ka nnukwu azụ̀ a na-erugharị igwe ma ọ bụ ka a na-ewu ụlọ ọrụ ọhụrụ. Nwedịrị ike “ịgba asịrị” ebe ahịrị nwamba na-aga ịkọ akụkọ nke ha.
A egwuregwu na anya ọ bụ kemmasi na usoro nke ewepụghị agba ya na grajentị na na agba izu na pastels ndị nwere ike ịse ihe nkiri bara ọgaranya na nkọwa. N’akụkụ a FLERO Games nwere ike ịnya isi na ọ bụ n’ihu otu n’ime egwuregwu kachasị mma anyị hụtụrụla n’oge na-adịbeghị anya; na anya, Mmetụta Genshin emeela ka o siere anyị ike ... Bụrụ na ọ nwere ike, egwuregwu magburu onwe ya ị drunkụbiga mmanya ókè na udo ọ na-ewepụta
Ezigbo My Cat bụ egwuregwu ọhụrụ maka gam akporo na n'ime izu ole na ole enwetala ezigbo nyocha na na-positioned dị ka otu n'ime egwuregwu na site na ihe ndị kasị udo. Ọ bụrụ n ’ị na - achọ ihe ọhụụ ka ị gbanye ụda ọma na ụda olu, lee, ị ga - enweta ya ma na - akwụghị ụgwọ (ụfọdụ ịgbasa ozi).
Mee ka udo na nwamba enyi ndị ahụ na-egwu gị xicụbiga mmanya ókè na egwuregwu a nke ị na-ewu ụwa nrọ maka nwamba.
Anya ọ bụ kpokọtara
Oge ihe ijuanya ọ na - akpata nke ihe ọ bụla dị mma nwere ike ime
Mesie uru nke ọbụbụenyi ike
Mkparịta ụka na azụ azụ
Maka ụfọdụ ọ ga - abụ "ụtọ"
Ezigbo My Cat
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Mee ka udo nke ezigbo nwamba m na-ewepụta na mmanya ya na ụwa nke nwamba